Ny varotra, akanjo sy kiraro ary kiraro ambony indrindra amin'ny fetibe volamena tamin'ny taona 2020, anisan'izany ny palitao ambony, kiraro, solomaso ary fihenam-bidy bebe kokoa amin'ny akanjo, kiraro ary kojakoja fitadiavana ny fifanarahana lamaody, akanjo ary kiraro voalohany tsara indrindra amin'ny Amazon Prime Day, izay ahitàna ny ny ankamaroan'ny ...
Ny tatitry ny "Global Sports Bicycle Eyewear Market" dia manome antontan'isa lehibe momba ny fanjakan'ny indostria ary loharano fitarihana sy fitarihana sarobidy ho an'ireo orinasa sy olona liana amin'ny tsena. Ny tatitra fikarohana momba ny tsenan'ny baskety fanatanjahan-tena dia ahitana ny fitondrana ...
Inona avy ireo karazana solomaso tadiavinao amin'ny ho avy?
Taloha dia nahatsapa isika rehetra fa ireo tovovavy lehibe manao solomaso dia nerd, mahatsikaiky ary tsy mahatsikaiky. Na izany aza, tao anatin'izay taona faramparany izay, marika marika «flyover» maro be no nanohana azy ireo, ary ny solomaso izay tsy tian'ny olona tampoka dia lasa lamaody ary lasa ne ...
Mbola misafidy ny solomaso solomaso boribory sy kianja ve ianao?
Ny solomaso solomaso dia lasa iray amin'ireo ilaina amin'ny arabe. Mbola misafidy ny solomaso solomaso boribory sy kianja ve ianao? Rehefa mandeha eny amin'ny arabe dia ny solomaso miaro ny maso no solomaso. Vao tsy ela akory izay, ny lamaody ny frame tsy ara-dalàna dia notsofina mangina tao amin'ny indostrian'ny fitaovana. Izany ...
Raha ny hevitry ny besinimaro, ny solomaso dia "fampiasa amin'ny fahavaratra", fa fantatrao ve? Manimba ny maso koa ny taratra ultraviolet amin'ny ririnina. Na dia amin'ny andro rahona aza dia mbola hahatratra ny masonao ihany ny UVA sy UVB. Raha ny marina dia marefo sy marefo kokoa ny masontsika amin'ny ririnina. Amin'ny lafiny iray, b ...
Sunglasses koa dia manana "fiainana talantalana"
Mba hisafidianana solomaso solomaso mety, ireto toro-hevitra fototra manaraka ireto dia tokony hotadidina: fiarovana UV: misafidy solomaso misy afaka manakana 99% ~ 100% taratra UVA sy UVB. Haben'ny solomaso: mividy solomaso lehibe. Ny solomaso misy maso loatra dia manarona faritra maro ary manampy amin'ny fampihenana ny ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-06-03
Sunglasses, toy ny karazana solomaso-masoandro, dia an'ny vokatra fiarovana ny vatan'olombelona. Ny tena fiasan'ny solomaso dia ny fisorohana ny fahasosorana sy ny fahasimbana ateraky ny taratra ultraviolet ivelany amin'ny mason'olombelona ary manome tontolo iainana mahazo aina. Tsy misy prot mety ...